Yintoni ukwahlukahlukana? IAmazon iyahluka kwaye ihambise ukutya ekhaya. | Ezezimali
Yintoni ukwahlukahlukana? IAmazon iyahluka kwaye ihambise ukutya ekhaya.
UAlejandro Vinal | | iinkampani
Xa ndibhala inqaku elitsha leendaba andithandi ukuba lihlale inqaku elinolwazi, kodwa ndikhetha ukucacisa, ubuncinci ngokubanzi, ezo iikhonsepthi zoqoqosho okanye iinkampani ezikhankanyiweyo ukuze ngale ndlela sizibeke kwimeko kwaye siziqonde ngcono iindaba.
Kule meko, umxholo oza kusebenza yile ukwahluka kweshishini:
1 Yintoni ukwahlukahlukana?
2 Ithini imeko ekhethekileyo yeAmazon?
Ewe, zonke iinkampani zikhangela kwaye ziphande ngendlela yokufumana ukhuphiswano, Uncedo lokhuphiswano luphawu ekufuneka luphuhliswe yinkampani ukomeleza indawo efanelekileyo ngokubhekisele kwabo bakhuphisana nayo kwaye ngale ndlela, yanda izibonelelo zayo.
Ngenxa yoku, inkampani kufuneka ilandele zeziphi izicwangciso iya kuqhubeka kwinqanaba lokhuphiswano, elisebenzayo nelomanyano. Siza kuthetha ngezimbini zokuqala kumanqaku alandelayo.
Isicwangciso sobumbano, ke yiyo le nto iziqondayo izigqibo zenkampani malunga nokuba ngawaphi amashishini khu phiswano kwaye ngawaphi amacandelo aya kuyeka ukukhuphisana, oko kukuthi, ubungakanani bentshukumo.
Xa iinkampani kufuneka zenze izigqibo malunga nesicwangciso sobumbano, kufuneka bazenze ngokwe 3D: nkqo, ngokwejografi kunye tye, ngokulinganayo, siza kuthetha ezimbini zokuqala kwixesha elizayo.
Ngokuphathelele ubukhulu tye, Inkampani kufuneka ithathe isigqibo sokuba leliphi na icandelo eliza kukhuphisana nalo, oko kukuthi, ukuba lithatha isigqibo sokwahluka.
Nje ukuba siyicwangcise imbono yethu, singatsho ukuba ukwahluka kweshishini kubandakanya ukwandiswa kwe- Isipaji seshishini Yenkampani ebonelela ngeemveliso ezintsha okanye engena kwiimarike ezintsha.
Ngaphakathi kokwahlukahlukana, bayaziwa iintlobo ezimbini ezahlukeneyo:
Ukwahluka okuhambelana: Xa kukho unxibelelwano okanye unxibelelwano phakathi kwecandelo elidala kunye nelitsha. Umzekelo, xa inkampani ye-apile, eyayizinikele kubuchwepheshe obutsha, yathatha isigqibo sokungafani kunye nokuvula umhlaba weefowuni eziphathwayo ngo-2007 (kunye necandelo lobuchwepheshe).
Ukwahluka okungahambelaniyo: Xa kungekho buhlobo phakathi kwamashishini kunobuhlobo bezemali, oko kukuthi, imvelaphi yezixhobo. Umzekelo, inkampani yeTATA ezinikele kumacandelo angafaniyo, njengokulima iti okanye ukwenziwa kweemoto. Njengoko sibona, abananto yakwenza nomnye nomnye.
Ithini imeko ekhethekileyo yeAmazon?
Ityala leAmazon lityala difícil ukuhlelela ukusukela ukuba, kwelinye icala, imalunga nezorhwebo kwi-Intanethi, icandelo apho ikhethekileyo khona, kwelinye icala, imveliso abayinikelayo ukutya, Icandelo apho kude kube ngoku bebengekho, ngokoluvo lwam, umntu unokukhetha ukungafani ayizalani.
Ulwahlulo olwenziwa yiAmazon ngezinto ezimbini ezahlukeneyo, kodwa iinkonzo ezihambelana nabathengi bayo:
Okutsha kweAmazon, inkonzo yokuhanjiswa kokutya, evumela abathengi ukuba ba-odole ukuthengwa kwabo kwaye bakufumane kungaphelanga neeyure ezingama-24. Inkonzo enokonwatyelwa eSeattle ukusukela ngo-2013 kodwa ayikafiki eYurophu de kwaba nguSeptemba walo nyaka, ngakumbi iJamani ne-Austria.
Ingingqi yeAmazon, uhlobo lokutya nje, oko kukuthi, iqonga le-Intanethi apho iivenkile zokutyela "zisayina", kule meko, okwangoku, ukusuka eSeattle kwaye ibafaka kunxibelelwano nabathengi abafuna ukuba babathumele ukutya esele kuphekiwe ekhaya. Ukubambela iAmazon njengomlamli nje obeka abathengi ekunxibelelaneni neeresityu kwaye kuxhomekeke kwixabiso kunye nokuthunyelwa kwale yokugqibela.
Mhlawumbi kungekudala siza kubona ezi nkonzo zivela kwintengiso enkulu ukuya ilizwe lethu, nangona ngelo xesha ndiyathemba ukuba sele benazo kwikomkhulu lerhafu eSpain, kwaye ke musa ukwenza ukhuphiswano olungalunganga ngokuchasene neenkampani ezihambelana nomthetho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Yintoni ukwahlukahlukana? IAmazon iyahluka kwaye ihambise ukutya ekhaya.
Ungayigcina njani imali ngekhomishini kwimarike yestokhwe?
Ngaba i-e-commerce isinika umgangatho wobomi obungcono?